प्रदेश ५ – Page2– Sansar Post
Home ≫ Archive By Category "प्रदेश ५" (Page 2)
२४ घण्टामा रुपन्देहीमा थपिए ४८ जना कोरोना संक्रमित
बुटवल, १७ साउन । रुपन्देहीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कायार्यालय रुपन्देहीले जारी गरेको पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्याँक अनुसार बुटवलमा २७ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३९४ पुगेको छ । पछिल्लो समय थपिएका संक्रमितहरुमध्ये बुटवलमा ३७ जना, सिद्धार्थ नगरमा ४ जना, तिलोत्तमामा १३ […]
बुटवल, १७ साउन । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पहिलो लायन्स भिलेज स्थापना भएको छ । विकासमा तुलनात्मकरुपमा पछाडि परेको र विपन्न वर्गको बसोबास भएको वस्ती छनोट गरेर नगरपालिकाको वडा नं. ६ को बांसघारी टोलमा लायन्स क्लब अफ बुटवल देउरालीले ‘माई लायन्स भिलेज’ स्थापना गरेको हो । क्लबले वर्षभरि गर्ने सामाजिक सेवाका कामहरुलाई एउटै गाउंमा केन्द्रीत गरी […]
अर्घाखाँचीमा पुर्णकालिन निषेधाज्ञा जारी
अत्यावश्यक पसलहरु बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म खुल्ने : अरु सबै बन्द अर्घाखाँची, १७ साउन । अर्घाखाँचीमा शनिवार मध्यरातदेखि पुर्णकालिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । कोरोना संक्रमण दर उच्च हुँदै गएपछि जिल्ला स्थित कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) को बैठकले पुर्णकालिन निषेधाज्ञा लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । साउन १६ गते शनिवारराति १२ बजेदेखि जारी […]
लुम्विनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी दलले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र
संसारपोस्ट संवाददाता · १६ श्रावण २०७८ · 0
अल्पमतको सरकार विघटन गरी अर्को सरकार गठनको ब्यवस्था मिलाउन माग बुटवल, १६ साउन । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्री शँकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमत रहेकोले सरकार विघटन गरी अर्को सरकार गठनको ब्यवस्था मिलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई शनिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउंदै विपक्षी दल […]
दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि लुम्बिनीमा छुट्टै कानुन बनाउन माग
बुटवल, १६ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत नियन्त्रण र दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन माग गरिएको छ । प्रदेशमा केहि समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित समुदायको सशक्तिकरण र छुवाछुत नियन्त्रण गर्ने गरि छुट्टै विधेयक निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । तर, कोरोना महामारी शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया नै अबरुद्ध भएका […]
बुटवल, १६ साउन । विश्व हेपाटाइटिस दिवसको अवसरमा रोटरी ई—क्लव अफ मेडिकोफ्युजन हाइब्रिड नेपालले शनिबार बुटवलको देविनगर स्थित आशा फाउण्डेशनमा निःशुल्क हेपाटाइटिस परीक्षण गरेको छ । क्लवले फाउण्डेशनमा रहेका २५ जनाको निःशुल्क हेपाटाइटिस बी र सी परीक्षण गरेको अध्यक्ष डा. सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा कार्यक्रम संयोजक फिजिसियन डा. मनिष विश्वकर्मा र डा. […]
ओभर लोड नियन्त्रणका लागि बन्द रहेका धर्मकाँटा संचालन गरिने
बुटवल, १६ साउन । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले लामो समय देखि बन्द रहेका धर्मकाँटा संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवार बुटवलमा बसेको विशेष बैठकले ओभर लोड नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा ट्रक यातायात व्यवसायी समितिले संचालनमा ल्याएका हाल बन्द रहेका धर्मकाँटा संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । धर्मकाँटा संचालन नहुदा स्वदेशी तथा […]
नेपाल नियमित रक्तदाता संघद्वारा रक्तदान : १०६ युनिट रगत संकलन
बुटवल, १६ साउन । नेपाल नियमित रक्तदाता संघले शनिवार रुपन्देहीको दुई स्थानमा वृहत रक्तदान गरेको छ । संघको आयोजनामा बुटवलमा गरिएको रक्तदानमा ६५ प्वाईन्ट र सैनामैनामा गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा ४१ जना गरि कुल १०६ प्वाईन्ट रगत संकलन भएको छ । संघले हरेक महिनाको तेस्रो शनिवार नियमित रुपमा र आकष्मिक रुपमा आवश्यकता परेमा जुनसुकै बेलामा पनि […]
रोटरी बुटवल साउथद्वारा १० ब्यक्ति र ३ संस्था ‘कोभिड हिरो’को रुपमा सम्मानित
बुटवल, १६ साउन । रोटरी क्लव अफ बुटवल साउथले कोरोना महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा रहेर कोरोना संक्रमित बिरामीलाई सहयोग गर्नेहरुलाई ‘कोभिड हिरो’ को रुपमा सम्मान गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई खाना खुवाउने, रगत आवश्यक परेका बिरामीलाई रगतको आपूर्तिमा भूमिका खेल्ने, संक्रमित बिरामीलाई परामर्श तथा उपचारमा सहयोग गर्ने र यो अभियानमा सहयोग गर्ने […]